Tendrombohitra Garizima - Wikipedia
Ny tendrombohitra Gerizima
Ny tendrombohitra Garizima na tendrombohitra Gerizima dia tendrombohitra ao Jordania Andrefana eo akaikin'i Nablosa ao amin'ilay faritra atao hoe Samaria ao amin'ny Baiboly. Io tendrombohitra io dia toerana masina ho an'ny Samaritana. Voasoratra ao amin'ny Torah samaritana io tendrombohitra io fa tsy hita ao amin'ny Torah jiosy.
Amin'ny fiteny hebreo samaritana izy dia atao hoe Ar-Garzim io tendrombohitra io, amin'ny fiteny arabo dia جبل جرزيم / Jabal Jarizīm, na جبل الطور‎ / Jabal et Tur, amin'ny fiteny hebreo jiosy kosa dia הַר גְּרִיזִּים / Har Gerizim.
Mirefy 881 metatra ny tendrombohitra Garizima ary mideza dia mideza ny ao amin'ny tahezany avaratra sady rakotra ahitra ny tampony. Isan'ireo tendrombohitra avo indrindra ao Jordania Andrefana sy ao Israely izy. Misy loharano mangatsiatsiaka mivoaka ny eny amin'ny fotony rehefa lohataona. Tanàna madinika roa no miorina eo amin'ny tahezany, dia i Kiryat Luza (tanàna samaritana) sy i Har Brakha (tanàna jiosy) (hebreo: הַר בְּרָכָה, izay midika hoe "Tendrombohitry ny Fitahiana").
Firesahana an'i Gerizima ao amin'ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny Bokin'ny Deoteronomia (na Deoterônômy) ao amin'ny Baiboly dia ahitana andalana miresaka ny amin'ny tendrombohitra Gerizima, araka izao:
"Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay alehanao holovana, dia ny fitahiana no hotononinao eo an-tendrombohitra Gerizinia, ary ny fanozonana kosa eo an-tendrombohitra Ebala." (Deo. 11.29, Ny Baiboly)
"Ireto no hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hitsodrano ny vahoaka, rehefa tafita an'i Jordana hianareo: dia ny Simeona sy ny Levy sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa sy ny Benjamina." (Deo. 27.12, Ny Baiboly)
Miresaka ny amin'ny tendrombohitra Gerizima koa ny Baiboly ao amin'ny Bokin'i Josoa (na Jôsoe), araka izao:
"Ary ny Isiraely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara, teo anatrehan'ny Levita mpisorona, izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, na olona hafa firenena, na Isiraely: ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima, ary ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, araka izay efa nandidian'i Mosesy mpanompon'i Jehovah fahiny, mba hitso-drano ny olona Isiraely." (Josoa 8.33, Ny Baiboly)
Ao amin'ny Bokin'ny Mpitsara dia ahitana andalana miresaka ny amin'ny tendrombohitra Gerizima koa, araka izao:
"Ary nisy nilaza izany tamin'i Jotama, dia nandeha izy ka nitsangana teo an-tampon'ny tendrombohitra Gerizima, ary nanandratra ny feony ka niantso hoe: Mihainoa, ahy ianareo mponina ao Sekema mba hihainoan'Andriamanitra anareo kosa." (Mpits. 9.7, Ny Baiboly)
Tany amin'ny taona 330 tal. J.K. tany ho any ny vahoaka samaritana dia nanorina tempoly teo an-tampon'ny tendrombohitra Gezirima izay nanjary foibentoeran'ny fivavahana samaritana (na samaritanisma), sahala amin'ny Tempolin'i Jerosalema izay foibentoeran'ny fivavahana jiosy (na jodaisma). Io tempoly io dia naorina taloha kelin'ny famaboan-tanàna nataon'i Aleksardra Lehibe  na taoriana kelin'izany . Voahodidina manda fiarovana, araka ny Bokin'ny Makabeo, io tempoly io tamin'izany fotoana izany. Noravan'ilay mpanjaka hasmoneana atao hoe Joany Hirkana I  tamin'ny taonjato faharoa tal. J.K. io tempoly io (taona 108 tal. J.K.).
Araka ny fisavana ny tao ambanin'ny tany sy araka ny loharanon-kevitra tamin'ny Andro Taloha dia nisy tempoly naorina ho an'i Zeosy (andriamanitra grika: Ζεύς / Zeús) teo amin'io toerana io tamin'ny andron'ny emperora romana Hadriano (latina: Imperator Cæsar Traianus Hadrianus Augustus). Rehefa niova ho amin'ny fivavahana kristiana ny Empira bizantina dia nanery ireo vahoaka vitsy anisa mba hanaraka ny fivavahana kristiana araka ny heveriny ho ny tena izy. Ny emperora Zeno (latina : Flavius Zeno Perpetuus Augustus), izay nanjaka hatramin'ny taona 474 ka hatramin'ny 491 dia nanenjika ny Jiosy sy ny Samaritana sady nandrodana ny tempoly samaritana (fanidroany izany) izay tsy voaorina intsony.
Samaritana manao fivahiniana masina mandritra ny Paska eo amin'ny tendrombohitra Garizima.
Rehefa tonga fivavahana matanjaka indrindra ny fivavahana kristiana teo amin'ny empira romana dia tsy navela hankeny amin'ny tendrombohitra Gerizima ny Samaritana. Fiangonana voaaro manda no naorina teo an-tampony. Isan'ny niteraka ny fikomian'ny Samaritana izany izay notarihin'i Joliano bena Sabara tamin'ny taonjato faha-6, dia fikomiana narahana famaizana mahery vaika ka saika nandripaka tanteraka ny Samaritana tao avaratr'i Palestina izay tsy nisy sisa afa-tsy mponina vitsy dia vitsy.
Na dia noravana aza ny tempolin'ny Samaritana dia nijanona ho foiben'ny fivavahana samaritana ny tendrombohitra Garizima hatramin'izao. Izany no mahatonga ny mpisorom-be samaritana tsy maintsy honina manodidina an'ilay tendrombohitra. Io mpisorona io dia fidina avy amin'ireo fianakaviana (na "trano") mpisorona "izay heverina fa taranak'i Aarona, rahalahin'i Mosesy".
Saika ny Samaritana rehetra no monina tao amin'ny vakin-tanàn'i Nablosa (izay nantsoina hoe Sekema na Sikema tany aloha), ao Jordania Andrefana, eo ambanin'ny tendrombohitra Garizima, izay tsy ananany zo manokana. Ny mpanjakan'i Jordania atao hoe Hussein (nanjaka 1952--1999) dia nividy tany teo amin'ilay tendrombohitra izay nomeny ny vahoaka samaritana. Nanorin-tanàna teo ny Samaritana ka nanome anarana azy hoe Kiryat Luza (hebreo: קרית לוזה; arabo: قرية لوزة‎). Ankehitriny io faritra io dia lasa foiben'ny fiainana ara-panahin'ny vahoaka samaritana manontolo ka eo no onenan'ny mpisorom-be. Zava-dehibe amin'ny Samaritana ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka Hussein. Ahitana sinagoga ny ao amin'io tanàna io. Ny Samaritana ao Nablosa dia tsy monina ao Kiryat Luza avokoa, nefa noho ny afitsok'ireo Intifada roa dia maro aminy no nanorim-ponenana teo amin'ny faritra milamina kokoa eo amin'ny tendrombohitra Garizima.
Miteny arabo andavanandro ny Samaritana ao Jordania Andrefana nefa mampiasa fiteny hebreo samaritana rehefa amin'ny fanompoam-pivavahana.
↑ Ursula Schattner-Rieser (chargée de cours d'araméen et de grammaire comparée des langues sémitiques à l'ELCOA de l'Institut catholique de Paris, et chargée de conférences d’"hébreu qumrânien et dialectes araméens des premiers siècles" à l'École pratique des hautes études en Sorbonne) Des Samariens au bon Samaritain, ou le plus petit groupe ethnico-religieux.
↑ 2,0 et 2,1 Araka ny lahatsoratra "Samaritans" ao amin'ny Jewish Encyclopedia, 1901-1906.
↑ I Joany Hirkana I dia zanakalahy faharoan'i Simona Makabeo sady mpisorom-be tao amin'ny Tempolin'i Jerosalema tamin'ny faran'nytaonjato faharoa tal. J.K.
↑ "The Socio politics of the Samaritans in the Palestinian Occupied Territories", par les Dr Hussein Ahmad Yousef et Iyad Barghouti, An-Najah National University.
↑ Ny Intifada dia fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka hanoherana ny tafika israeliana izay nitoby teo amin'ireo faritra azon'ny Israeliana sy tamin'ny faritra nomena ny Fahefana palestiniana toa ny faritr'i Gaza sy i Jordania Andrefana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendrombohitra_Garizima&oldid=997776"
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 13:32 ity pejy ity.